Mmetụta nke na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ àgwà nke ebu na ya arụmọrụ - Aojie akpụzi Co., Ltd.
Mmetụta nke ọkụ na-arụ ọrụ nke ebu na arụmọrụ ya
Ọrụ na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ nke ebu nwere mmetụta dị ukwuu na arụmọrụ na ndụ ọrụ nke ebu. Na ndụ n'ezie na-arụ ọrụ, anyị ebu ogbako na-achọ na-aga n'ihu mma na imewe na mmepụta nke dị iche iche Ebu, na a ga-enwe nsogbu na kpọmkwem ọrụ. Anyị ga-atụle ma gbanwee nsogbu ndị dị na ojiji nke ịkpụzi ya na ndị na-emepụta Shenzhen
Mgbakpo ahụ na-agwụsị na mgbawa nke akụkụ ndị na-arụ ọrụ nke ebu na mgbaji mmalite nke usoro eji eme ihe metụtara usoro ọrụ ọkụ nke ebu.
(1) Ibe ya bụrụ usoro, nke bụ ihe dị mkpa njikọ ke n'ichepụta usoro nke na-anwụ anwụ na-arụ ọrụ akụkụ. Maka ebu nke igwe alloy dị elu, a na-etinyekarị teknụzụ maka teknụzụ metallographic dịka nkesa carbide. Tụkwasị na nke ahụ, a ghaghị ịchịkwa usoro ikuku na-agba ume, a ga-ahazi nkọwapụta kpo oku ziri ezi, a ga-anakwere usoro ịme ihe ziri ezi, na ịjụ oyi ngwa ngwa ma ọ bụ nkwụsị oge n'oge a ga-anakwere ya.
(2) Kwadebe maka ọgwụgwọ okpomọkụ. Dika ihe di iche iche na ihe ndi choro nke onwu na aru oru, ihe ndi ozo dika ikpo oku, ichota ma obu ichikota na iwepu ume kwesiri ime ka microstructure di nma, kpochapu nsogbu nke microstructure nke ibe ya oghere ma melite teknụzụ nhazi. Mgbe kwesịrị ekwesị nkwadebe okpomọkụ ọgwụgwọ, na netwọk nke abụọ cementite ma ọ bụ yinye carbide nwere ike wepụrụ, na carbide nwere ike spheroidized na nụchara anụcha, na nkesa ịdị n'otu nke carbide nwere ike na-akwalite. N'ụzọ nke a, quenching na temper quality nwere ike-ekwe nkwa na ọrụ ndụ nke ndị nwụrụ nwere ike mma.
(3) enda mba na iwe iwe. Nke a bụ ihe jikọrọ ya na ọgwụgwọ okpomọkụ nke ebu. Ọ bụrụ na ikpo oke ọkụ na-eme n'oge ikpochapu na kpo oku, ihe ọrụ a ga - eme ka ọ ghara ịda mbà karịa, kamakwa ọ na - akpata nrụrụ na mgbawa n'oge oyi, nke ga - emetụta ndụ ndụ nke ọnwụ. N'oge quenching na kpo oku nke anwụ, kwesịrị nlebara anya pụrụ iche iji gbochie ọxịdashọn na decarburization. A ghaghị ịchịkwa nkọwapụta usoro ọgwụgwọ ọkụ. Ọ bụrụ na ọnọdụ kwere, agụụ okpomọkụ ọgwụgwọ nwere ike ji mee ihe. Mgbe o kwusịrị, ọ ga-ewe iwe na oge, a ga-enwetakwa usoro dị iche iche iwe dị ka ọrụ chọrọ.
(4) Mgbakwunye enyemaka nrụgide. A ga-emeso akụkụ ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na nchekasị nchekasị mgbe ha gbusịrị ike iji kpochapụ nrụgide dị n'ime nke igwe na-arụ ọrụ siri ike, iji zere oke nrụrụ na mgbawa ndị amịcha N'ihi na ebu na elu nkenke, nchegbu enyemaka tempering ọgwụgwọ dị mkpa mgbe egweri ma ọ bụ eletriki machining, nke bụ enye aka na-akawanye ebu nkenke na rụọ ọrụ ọrụ ndụ.